गृहमन्त्रीको गाडीमा साइरन बज्दैन ? – Everest Dainik – News from Nepal
गृहमन्त्रीको गाडीमा साइरन बज्दैन ?
काठमाडौं, साउन २ । नेपालका सबै भिभिआइपीको सवारीमा साइरन बजाउँदै गाडी कुदाइए पनि गृहमन्त्री जर्नादन शर्माको गाडीमा साइन बज्दैन । र उनको गाडी ट्राफिक जाममा सर्वसाधारणले जस्तै ट्राफिक खुलेपछि मात्रै अगाडि बढ्छ ।
यसबारेमा गृहमन्त्री शर्मा भन्छन, ‘ मैले गृहमन्त्री भएको छैटौँ दिन भने – अबदेखि हामी गाडीमा साइरन नबजाऔँ, जथाभावी बाटो काट्दै अघि नबढौँ । ट्राफिक जामको अवस्थामा सर्वसाधारणले जस्तै पालो कुरेरै हिँड्ने गरौँ ।
गृहमन्त्रीका अनुसार सबै भिभिआइपीका सवारीले एउटै मापदण्डमा साइरन बजाउँदै र बाटो छिचोल्दै हिँड्न आवश्यक छैन । ‘यो आफूले बुझ्ने र लागू गर्ने कुरा हो । भिभिआइपीको सुरक्षा प्रति गृह प्रशासन संवेदनशील छ । तर सबैले उस्तै गरी हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन ।’
ट्याग्स: Home minister, janardan sharma